Ziyini izinzuzo zemikhiqizo yokubhekwa kwevidiyo yeSolar Panel? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ziyini izinzuzo zemikhiqizo yokubhekwa kwevidiyo yeSolar Panel?
Ukuqashwa Kwevidiyo Yesolar Solar ingasetshenziswa ku-:
Izindawo ezibalulekile zokuqapha ezokuphepha lapho ugesi ungekho lula ezindaweni zasemadolobheni nezasemakhaya, ukuqapha isimo somgwaqo omkhulu, ukuqapha indawo yokwakha, ukuqapha indawo yezimayini, ukuqapha okukhulu kanye nokufakwa esiteshini, ukuqapha okukhulu kwegridi yamandla, ukuqapha ukuvikelwa komlilo wehlathi, ukuqapha okukhulu kwemingcele, ukuqapha imishini yokonga amanzi, Ukuqapha izindawo ezinkulu zokutshala nokuzalanisa.
Izinzuzo zeUkuqashwa Kwevidiyo Yesolar Solar products
Eqinisweni, ngaphansi kwendlela yokuthuthuka ekhula ngokulula yezinhlelo zokuqapha, ukuhlangana nobuchwepheshe obusha kuyindlela ebalulekile yokuphuma kobuchwepheshe bokuqapha ezokuphepha, futhi kuyindlela ebalulekile yokwandisa izinzuzo zobuchwepheshe obusha. Eminyakeni emibili eyedlule, ubuchwepheshe bamapaneli elanga benze intuthuko enkulu, ikakhulukazi emkhakheni wezomphakathi, ukusebenza kahle kokuguqulwa kwesithombe okwenziwe ngamaphaneli elanga kuthuthukiswe kakhulu, futhi ubuchwepheshe bamabhethri wesitoreji selanga buvuselelwe, kwavumela isitoreji esinamandla amakhulu , imvula nemvula yesikhathi eside. Ukunikezwa kwamandla kwansuku zonke sekuyenzeka, futhi ukuthuthukiswa kobuchwepheshe besilawuli belanga nakho kubeke isisekelo esiqinile sokusetshenziswa okuzinzile kobuchwepheshe belanga emkhakheni wokuqapha nokuphepha. Ukusetshenziswa kwemikhiqizo yamandla elanga ephezulu emkhakheni wokuqapha ezokuphepha kuzohlinzeka ngamathuba abanzi wokunwetshwa kwensimu yezokuphepha.
Ukwenza izintambo ze-Elevator Video Surveillance
Kuyini Ukuduma Kwezulu?